China kwụ n'elu ụlọ packaged Unit Manufacturers na Suppliers | Bueco
Bueco n'elu ụlọ packaged nkeji na-etinyere na ulo oru na azụmahịa ubi ndị dị otú ahụ dị ka hotel, Ahịa, ikike emeso shop, ụlọ ọrụ ụlọ na factory omumuihe. Ha zuru okè jikọọ ọtụtụ e ji mara nke nnukwu-sized Central a / c, dị ka mma, nkasi obi, elu-klas, mfe na mgbanwe. The ọhụrụ imewe-eme ka eji ohere modul, atụmatụ nke obere-sized azụmahịa oge a ụlọ ohere, na-eme jụụ na okpomọkụ ikuku mgbasa n'ime ọ bụla n'ime ụlọ averagely etolite ...
Bueco n'elu ụlọ packaged nkeji na-etinyere na ulo oru na azụmahịa ubi ndị dị otú ahụ dị ka hotel, Ahịa, ikike emeso shop, ụlọ ọrụ ụlọ na factory omumuihe. Ha zuru okè jikọọ ọtụtụ e ji mara nke nnukwu-sized Central a / c, dị ka mma, nkasi obi, elu-klas, mfe na mgbanwe. The ọhụrụ imewe-eme ka eji ohere modul, atụmatụ nke obere-sized azụmahịa oge a ụlọ ohere, na-eme jụụ na okpomọkụ ikuku mgbasa n'ime ọ bụla n'ime ụlọ averagely etolite "Ọdachi" okpomọkụ dị iche. E wezụga, n'èzí ọhụrụ ikuku nwere ike etinye obi gị dum. The ikuku ụzọ nwere ike jikọọ na ime ụlọ ịchọ mma nke a na-zoro kpamkpam nakwa na ọ dịghị ogide ọ bụla ohere. Ọ na-a ọgbọ ọhụrụ nke ngwaahịa na nke etiti a / c na omenala azụmahịa a / c.
1. Dị iche iche na ngwaahịa na obosara ngwa
The usoro nke n'elu ụlọ nkeji agụnye ọtụtụ dị iche iche nkọwa nke nwere ike kpamkpam izute ina nke n'ụlọ na azụmahịa ebe na-enye gị a ọma na obi ụtọ na gburugburu ebe obibi.
2. Complete ikuku usoro, mfe ọcha na ịdị ọcha, obere mmiri, mfe mmezi
The mgbanwe, na nkenke imewe na-eme mmezi nnọọ mfe. Disassembling ọtụtụ bolts ọ bụla n'akụkụ nke unit nwere ike imezi ihe ọ bụla akụkụ nke unit.
3. Microcomputer nwere ọgụgụ isi ihe njikwa
Ọ nwere ike iru akara ụdịdị: jụrụ, kpo oku, ventilashion na ịnara free jụrụ. Ọ na-nwere ọrụ nke oge na-apụ na odida ngosi.
4. Ezigbo arụmọrụ
World maara nke ọma ika nke isi akụkụ na-eji. Na-ekwe nkwa ò egwuregwu nke unit, na nlezianya arụmọrụ ule na-eme. E wezụga unit na-agba otu ebe na vibration na ụzụ na-irè-achịkwa ojiji nke multi-vane pitch centrifugal akwado, ụwa maara elu arụmọrụ Compressor na elaborative-e njikwa, moto, wdg
5. Jụụ ime ihe na-adaba adaba mmezi
Iru kasị ala mkpọtụ nke a / c ụlọ. The a / c nkeji na-enịm anya site a / c ebe nke na-ezukọ na ina nke ime ụlọ ala mkpọtụ kasịnụ ogo. Doo nke elu arụmọrụ na ala mkpọtụ centrifugal ofufe na-eme ka jụụ ọrụ na-emezu.
Free jụrụ mgbagha:
1. Mgbe ọ bụ kpo oku, ọhụrụ ikuku damper a na-emechi, na-alaghachi ikuku damper bụ 100% na-emeghe;
2. Mgbe ọ na-ajụ:
a. Mgbe ime ụlọ ụlọ okpomọkụ (okpomọkụ set) - n'èzí okpomọkụ ≥ 4 ℃, ọhụrụ ikuku damper bụ 100% na-emeghe, ma laghachi ikuku damper bụ 100% na-emechi, na ndị evaporator akwado na-agba ọsọ ka ịfụ ikuku ụlọ;
b. Mgbe 0 ℃ ≤ ime ụlọ ụlọ okpomọkụ (okpomọkụ set) - n'èzí okpomọkụ <4 ℃, ma ọhụrụ ikuku damper ma laghachi ikuku damper na-emechi, na unit na-adịghị na-agba ọsọ;
c. Mgbe ime ụlọ ụlọ okpomọkụ (okpomọkụ set) - n'èzí okpomọkụ < 0 ℃, nloghachi ikuku damper bụ 100% na-emeghe, na ọhụrụ ikuku damper bụ 100% mechiri emechi, mgbe ahụ Compressor, condensing ofufe na evaporator ofufe ga-arụ ọrụ kwesịrị ịfụ jụụ ikuku ụlọ.
Bueco okpomọkụ mgbake ọhụrụ ikuku unit amama ahụ nkịtị ụlọ n'ụlọ na ọchịchọ ọrụ, niile mmetọ dị ka anwụrụ ọkụ, uzuzu na isi wdg ga-ekpocha na iyuzucha na ọkọnọ ikuku usoro, otú ahụ ime ụlọ ikuku àgwà dị ọcha ma na-ala. The bi n'obodo na-eji oge ha na ihe karịrị 90% na ụlọ, ndị na-aga ụlọ ikuku quality bụ oké egwu ike. Bueco okpomọkụ mgbake ọhụrụ ikuku unit na-aghọ ndị "akpa ume" nke oge a na ụlọ fọrọ, ọ bụ a ọhụrụ ọhụrụ ikuku ike na gburugburu ebe obibi enyi na enyi ngwaahịa.
Ngwa nke nano film technology, kwụ reverse counter eruba technology, antistatic & mmezi free technology na attenuation technology, Bueco-edozi ala arụmọrụ nsogbu nke omenala okpomọkụ mgbake unit, ngụkọta okpomọkụ mgbake arụmọrụ ruo 75%. The okpomọkụ mgbake ọhụrụ ikuku unit ebelata ntụ oyi ibu, mbụ ego na usoro ọrụ na-eri.
Jụrụ ọrụ ugbu a
Heating ọrụ ugbu a
380/3/50 ( 60Hz Nhọrọ )
Hermetic Pịgharịa Compressor
Cond. onye ofufe
Direct chụpụrụ axial ofufe
Direct chụpụrụ centrifugal ofufe
Ájị chụpụrụ centrifugal ofufe
Refri. ụgwọ ego
Hermetically Kaakwa ya akara Pịgharịa Compressor
Jụrụ oyi: Ime ụlọ okpomọkụ DB: 27 ℃, WB: 19 ℃; n'èzí okpomọkụ DB: 35 ℃, WB: 24 ℃.
Heating oyi: Ime ụlọ okpomọkụ DB: 20 ​​℃, WB: 15 ℃; n'èzí okpomọkụ DB: 7 ℃, WB: 6 ℃.
Previous: Vetikal Ducted Split Unit
Next: Tropical n'elu ụlọ packaged Unit
Ahaziri kwụ n'elu ụlọ packaged Unit
Kwụ Fresh Air n'elu ụlọ packaged Unit
Kwụ n'elu ụlọ packaged Air Conditioning Unit
Kwụ n'elu ụlọ packaged Commercial Air conditioner
Fan Coil Units Ceiling Mounted, Cooling Tower Chiller, Central Air Unit, Common Series Dx Air Handing Unit, Tropical n'elu ụlọ packaged Air Conditioning Unit , Low Temperature Air To Water Heat Pump,